Ihe eji eme mma, Ihe ndi eji acho nma, Ogho ndi nkpuru osisi - Kpoo
Na-elekwasị anya Ogo dị elu, nnyefe ọsọ ọsọ, ị kwesịrị inweta ihe kacha mma.
Ọnụ akpa ọla edo
Zipu onwe gi, zipu ndi enyi, ka otutu mmadu onu mara mma.
Ejiri mee, ngosipụta nke obi, nri nke ihe ọma.
Patternskpụrụ ndị ejiri aka mee bụ concave na convex, ụcha na-egbukepụ egbukepụ, na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, ime ụlọ etemeete na-eje ije, na-edebe ihe ịchọ mma n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla, oge ọ bụla nwere ọkụ nke ya.
A na-ekpuchi nhọrọ gị niile ebe a. Anyị nwere ịkpụzi akụkụ atọ, ohiri isi, enyo, obere akpa, ngwa ntutu, olu olu, mgbaaka, ọla ntị, ọtụmọkpọ, nkpuchi, akwa aka, eri ịkpa akwa na ịtọ ngwaọrụ. Ogo dị elu, nnyefe ọsọ ọsọ, ị kwesịrị inweta ihe kacha mma.
Ahaziri Embroidery Set Mee N'onwe Gị ejiri mee wingkwa Akwa C ...
CHERISH, nke hiwere na 1995, dị na Yiwu, China, isi obodo nke obere ngwa ahịa n'ụwa. CHERISH bụ ọkachamara na-emepụta ọkachamara na imepụta, mmepụta na ahịa nke ngwaahịa aka Mee N'onwe Gị. N'ime afọ 20 gara aga, site na nrụpụta siri ike nke ụlọ ọrụ ahụ, mmepe, ike ọhụụ, ihe okike nke ụlọ ọrụ Mee N'onwe Gị inye ọtụtụ uru. Company'slọ ọrụ ahụ dị ugbu a: Ailuo, Aiyouwei, CHERISH, Cross-stitch, Diamond paint, Patchwork, Embroidery ọtụtụ isi usoro ngwaahịa na-anọ n'ọkwá kachasị elu n'ahịa ahụ. Ihe karịrị ụlọ ahịa aha ikikere 2000 na mba ahụ dum, ụlọ ọrụ ahụ matara onye ndu. Nnọọ na CHERISH.